Makedoniàna Manao Hetsi-panoherana Hiarovana Ny Lalàm-panorenana Amin’ny Fitsaràna Avon’ny Lalàm-panorenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Febroary 2016 12:05 GMT
Ireo hetsi-panoherana roa voalohany, nokarakarain'ny vovonana sivily Ajde!, dia natao ny 24 Febroary sy 25, nanaraka indrindra ny naneken'ny Fitsaràna Avon'ny Lalàm-panorenana hiverina handinika ilay tolokevitra. Tanora mpisolovava vao avy nahazo ny maripahaizana lisansa tamin'ny Desambrta 2015 no nanolotra ireo volavolam-panovàna ary toa hoe “mifampizàra birao fiasàna” amin'ilay mpisolovava miaro an'i Gordana Jankuloska, ilay Minisitry ny Atitany fahiny, iray amin'ireo olobe iharan'ny fanadihadiana noho izy voalaza ho nangalatra tamin'ny fifidianana tamin'ny 2013, mba hiantohana ny fahalanian'ny antoko VMRO-DPMNE.
Naneho ny hatezerany tamin'ilay hetsiky ny fitsaràna ireo olompirenena, politisiana mpanohitra sy ireo fiarahamonina sivily, tamin'ny fiahiahiany ny fisian'ny fitsabatsabahana ataon'ny VMRO-DPMNE antoko eo amin'ny fitondràna. Raha ny antoko indray nandà ny tsy fitsofotsofohany, ireo mpampiasa media sosialy sasany nampipongatra ireo lahatsoratra sy angon-drakitra hafa manondro ireo fifandraisana misy amin'ny VMRO-DPMNE sy ireo mpitsara dimy ireo. Izy dimy ireo dia samy notendren'ny maro an'isa anjakan'ny VMRO-DPMNE ao amin'ny parlemanta ho ao anatin'ny mpanao lalàna. Ny sasany manana fifandraisana manokana mihitsy amin'ireo manampahefana ao amin'ny antoko, ary mitàna andraikitra ambony ao amin'ny governemanta VMRO-DPMNE ny fianakavian'izy ireo. Ohatra, naboraky ny mpanohitra fa ny zanaka vavin'ny iray amin'ireo mpitsara no filohan'ny kaomitin'ny fanisàmbahoaka kitoatoa tamin'ny 2011.
Raha manova ny lalàna momba ny famotsorankeloka ny Fitsarana Avon'ny Lalàm-panorenana, dia ho ampela-tànan'ny filoha amin'izao fotoana izao ny fahefana hamela ny helok'ireo olona nanao heloka bevava, mba hiantohana ny fandresen'ny antokony. Araka ny nomarihan'ilay mpikatroka mafana fo, Ognen Janevski :
Tamin'ireo hetsipanoherana rehetra teo anoloan'ny fitsaràna, nihiaka teny faneva ireo mpandray anjara manohitra ny “mafia ara-pitsaràna” ary ny “mpandevina ny demaokrasia” sady niventy ny “raha tsy misy rariny – tsy misy fandriampahalemana!” Nofafazan-dry zareo atody ihany koa ilay rindrina “faux-baroque” eo anoloana. Na teny amin'ny fitsaràna, na teny anaty media sôsialy, samy nitaky tamberin'andraikitra avy amin'ireo mpitsara dimy avokoa ireo mpanao hetsi-panoherana, izay notanisainy tsirairay ny anaran'izy rehetra.
Vao tafaverina avy any amin'ilay fihaonana tao Londona niarahana tamin'ny Minisitra Eoropeana @DLidington. Inona ity vaovao manome alàlana ny famelankeloka tamin'ny hosoka tamin'ny fifidianana ity?
Araka ny vinavina sasany, mety ho amin'ny Aprily no afaka handray fanapahana momba io tolokevitra io ny fitsaràna. Eo am-panomanana ny hetsi-panoherana manaraka hatao ny mitataovovonan'ny Alatsinainy 29 Febroary eo anoloan'ny Fitsaràna Avon'ny Lalàm-panorenana ny .Ajde!